Android 11 inosvika sei uye rini Pop ➡️ Android Pop ▷ ➡️
Android 11 inosvika sei uye rini
Android 11 inosvika sei uye riniAndroid 11 yakaburitsa yekutanga yekuvandudza preview kuburitswa uye sezvanga zvichitarisirwa zviripo ikozvino sekuburitswa kwekusimudzira uye gare gare sekuburitswa kwekupedzisira.
Hapana nhau uye, sezvingatarisirwa kubva patafura ye google inogadziridza uye vakataurirana kakawanda mumwedzi ichangopfuura, nokudaro vachiva vekutanga Google smartphones izvo zvisingachagadziridzwe.
Sei uye kana Android 11 yasvika, nhau
Android 11 inowanikwa, muchidimbu, kune mamwe madhizaini eGoogle uye inosvika mune yega yega mushanduro yekupedzisira chete kusvika kumagumo egore, chaizvo mukati mekota yechitatu.
Android 11: Mazuva ekuvandudzwa
Pamwe pamwe nekutarisa kwekutanga kwevagadziri, muchokwadi, iyo nzira yemugwagwa pamwe neinotevera Shanduro dzeApple 11 uye izvi zvinotipa mukana wekuziva kuti sei uye riini shanduro dzekuvandudza dzinogovaniswa.
Tichiongorora nzira yemugwagwa yakaburitswa neGoogle, tinogona kuona kuti kumwe kufambira mberi kwevagadziri uye matatu betas kuchasvika mumwedzi inotevera pamberi peiyo vhezheni yekupedzisira yeApple 11, yakarongerwa Nyamavhuvhu:
Android 11 Yekuvandudza Yekutanga # 1 muna Kukadzi;
Android 11 Yekuvandudza Ratidziro Nyaya 2 munaKurume;
Android 11 Yekuvandudza Ratidziro Nyaya 3 muna Kubvumbi;
Android 11 beta nhamba 1 muna Chivabvu;
Chinyorwa 2 muna Chikumi Android 11 beta;
Android 11 beta nhamba 3 muna Chikunguru;
Yekupedzisira vhezheni yeApple 11 pakati paAugust naSeptember.
Gore rino, Google inoita kunge iri kuda kuitora zvakanaka uye kunyatsoyedza iyo vhezheni itsva ye android kuburitsa yekutanga vhezheni vhezheni mavhiki mashoma apfuura kupfuura munguva yakapfuura, uye kuvimbisa imwe nyowani mwedzi wega wega kusvika iyo yekupedzisira vhezheni.
Zviripachena, iyo yambotaurwa nguva pa Android 11 kuburitswa inongoreva chete maGoogle Pixels anotsigirwa nekuti zvigadziriso zvevamwe mamodheru zviri pamaonero emakambani, senguva dzose uye senguva dzose.
Chii chinonzi Android 11 Developer Ratidziro?
Google ichangotanga iyo yekutanga Android 11 yekuvandudza yekuongorora. Iyi inguva yakatsaurirwa iyo inoisa hwaro hweramangwana riri pedyo re girini robhoti nhare yekushandisa system, yekutanga chinhu chekudzidzisa chegumi neimwe huru vhezheni yeApple.
Android 11 Developer Ratidziro kutarisa kwekutanga pane inotevera vhezheni yeApple, sekutsanangurwa neiyo Mountain View imba, iyo, senguva dzose, inoita kuti iwanikwe uye inogona kutariswa chete kune vashoma nhamba yeSmartphones.
Maitiro ekuisa Android 11 Yekuvandudza Yekutarisa
Para gadza Android 11 Yekuvandudza Yekutarisa pane mamwe mapikiseti eGoogle, unogona kuvimba neFactory Image ne Android Studio. Zvikasadaro, iwe unogona kutarisira iyo OTA faira, iyo iwe yaunogona kurodha yakananga kune yako Smartphone uye nekumisa kuburikidza padivi kurodha pasi.
Mune ino kesi, tangazve yako Smartphone, pinda kudzoreredza modhi uye sarudza ADB sideload. Panguva ino iwe unofanirwa kubatanidza chishandiso kuPc ine Android nharaunda yekuvandudza uye Android Debug Bridge chishandiso chakaiswa, wobva wamhanya unotevera kuraira: adb sideload
Asi tizivise zvaunotaura pazasi kana iwe watoedza kare, isu tinokuchengeta iwe uchivandudza pane dzese nhau uye zvigadziriso pane iyi nyaya.
Maitiro ekuvanza online muWhatsApp yeApple